आमाकाे यस्तो बलिदान तपाई कसरी भुल्न सक्नुहुन्छ? कृपया एकपटक अवस्य पढ्नुहाेला – PathivaraOnline
Home > रोचक > आमाकाे यस्तो बलिदान तपाई कसरी भुल्न सक्नुहुन्छ? कृपया एकपटक अवस्य पढ्नुहाेला
आमाकाे यस्तो बलिदान तपाई कसरी भुल्न सक्नुहुन्छ? कृपया एकपटक अवस्य पढ्नुहाेला
admin July 2, 2019 रोचक, विचार, साहित्य	0
एउटा १६ वर्षको केटाले आफ्नो ममीलाई भन्यो कि ” ममि मेरो १८ अठारौ जन्म दिनमा तपाइले के गिफ्ट दिनुहुन्छ ? ” तब त्यो केटाको ममीले भनिन कि ” जब तिम्रो १८ अठारौ जन्मदिन आयो भने दराजको माथीको भागमा हेर्नू , त्यसमा तिम्रो गिफ्ट हुनेछ । अहिले नै भनीदिए भने मजा आउदैन ।
केहिदिन पछि त्यो केटा बिरामी परेछ र उसको ममी डेडीले उसलाई अस्पताल लिएर गयो । चेक अप भइसकेपछी डाक्टरले केटाको आमा बुवालाई भन्यो कि , ` तपाइको छोराको दिलमा प्वाल परेको छ । तपाइको छोरा दुई महिना भन्दा धेरै बाँच्न सक्दैन ।
एक वर्षपछी केटा हस्पिटलबाट ठिक भएर घर गयो । तब उसले थाहा पायो कि उसको `आमा ´ यो दुनियाँमा अब रहेन । उसले यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै उनले दराज खोल्यो र उसले देख्यो कि दराजको माथीको भागमा एउटा गिफ्ट राखिएको थियो । उसले छिटो भन्दा छिटो त्यो गिफ्ट खोल्यो , त्यो गिफ्टमा एउटा चिठ्ठी थियो ।
त्यो चिठिमा लेखिएको थियो , ” मेरो मुटुको टुक्रा यदि तैले यो चिठी पढिरहेको छस भने त बिल्कुल ठिक भएको होलास, तलाइ थाहा छ ? जब त बिरामी परेको थिइस , तब हामीले तलाई अस्पताल लिएर गएका थियौ, डाक्टरले भन्यो कि तेरो दिलमा प्वाल छ तब त्यो दिन म धेरै रोएको थिए । फैसला गरेकी मेरो दिल तलाइ दिन्छु , याद छ एकदिन तैले भनेको थिइस कि ` ममी मलाइ १८ अठारौ वर्षको जन्मदिनमा के दिनुहुन्छ ? त्यसैले छोरा मैले तलाई आफ्नो दिल दिइरहेको छु । यसलाई सम्हालिएर राख्नु , Happy Birth Day छोरा ” ।
सार :- एउटी आमा यसकारण मरीन कि उसको छोरा बाँच्न सकोस , दुनियामा आमाभन्दा ठूलो दिल कसैको छैन , आमाको दिल जस्तो दुनियामा कसैको दिल छैन । यदि तपाइलाई यो स्टोरी राम्रो लाग्यो भने शेयर अवस्य गरीदिनुहोस र यस्ता अरु मनछुने कथा पनि पढनुस ।
पापिनीले के के गरिन्? हेर्नुस् भिडियोमा!
भारतबाट नेपाल छिरे अचम्मका व्यक्ति, देखाए यस्तो चमत्कार (भिडियोसहित)
रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाई देउ भन्दैँ यी युवाले चढाए पाथिभरा मन्दिरमा रविको फोटो !
पाँचथरमै एकै परिवारका पाँच जनाको विभत्स हत्या! २६ बर्ष पहिले टिम्बुरे हत्याकाण्ड उस्तै भयानक!
आफ्नो साइकलले कुल्चेको कुखुराको चल्ला र पैसा लिएर जब अस्पताल पुगे यी बालक!